Nhau - INOSVIRWA NEMVURA VS INORENGA MVURA VS MVURA: NDEPI?
Tese tinoona mareferensi emidziyo isingapindi mvura, midziyo isingapinde mumvura uye inodzivirira mvura ichikandwa pazvigadzirwa zvemagetsi. Mubvunzo mukuru ndewokuti: Chii chakasiyana? Pane zvakawanda zvinyorwa zvakanyorwa pamusoro penyaya iyi, asi isu takafunga kuti tichakanda mu-masendi edu maviri zvakare uye totarisa zvakanyanya mutsauko uripo pakati pematemu ese matatu, tiine tarisiro yenyika yemidziyo.
Chekutanga, ngatitangei netsananguro dzeduramazwi dzinokurumidza kusapinda mvura, kusapinda mvura, uye kusabvisa mvura, sekupihwa kwandakaitwa neOxford English Dictionary:
Kudzivirira mvura: inokwanisa kuramba kupinda kwemvura kune imwe nhanho asi kwete zvachose
Inodzivirira mvura: haipindi nyore nyore nemvura, kunyanya nekuda kwekurapwa nechinangwa chakadaro nejira repamusoro.
Isingapindi mvura: haipindire mumvura
Kusapinda Mvura kunorevei?
Kudzivirira mvura ndiyo yakaderera mwero wekudzivirira kwemvura yevatatu. Kana mudziyo wakanyorwa kuti haupindi mvura zvinoreva kuti mudziyo wacho unogona kugadzirwa nenzira inoita kuti inonetsa kuti mvura ipinde mukati mawo, kana kuti pamwe wakaputirwa nechinhu chakareruka chinobatsira kuvandudza mvura. mukana wemudziyo wekupona kana wasangana nemvura. Kusapinda mumvura chinhu chaunowanzo chiona pakati pewachi, zvichichipa simba rekutsungirira avhareji yekugeza maoko kana mvura yekunaya.
Zvinorevei Kudzivirira Mvura?
Inodzivirira mvura coatings ingori nhanho yekukwira kubva kumabhati asingapinde mvura. Kana mudziyo wakanyorwa kuti unodzinga mvura unotove une zvivakwa zvekuti, waufungidzira, kudzinga mvura kubva pauri, uchigadzira. hydrophobic. Chishandiso chinodzinga mvura chinomira mukana wakakura kwazvo wekuputirwa neimwe mhando yefirimu-tete nanotechnology, ingave iri mukati, kunze, kana zvese, uye ine mukana uri nani wekumira pamvura pane yako avhareji mudziyo. Makambani mazhinji anoti anobvisa mvura, asi izwi iri rinokakavadzana zvakanyanya nekuti chigadziro chemvura chakasimba hachiwanzo uye nekuda kwemibvunzo yese uye zvinhu zvisingatarisike zvine chekuita nazvo.
Chii Chinonzi Waterproof?
Waterproof's tsananguro yakatwasuka, asi pfungwa iri shure kwayo haina. Parizvino, hapana chiyero cheindasitiri chakamisikidzwa kuitira kuti mudziyo uronge senge isina mvura. Chinhu chepedyo chiripo parizvino, maererano nechiyero chechiyero, ndicho Ingress Dziviriro Rating chikero (kana IP Code). Chikero ichi chinopa zvinhu chiyero kubva pa0-8 maererano nemashandire anoita mudziyo pa kudzivirira mvura kuti ipinde mairi; aka ingress yemvura. Zviripachena, pane chimwe chikanganiso chikuru muhurongwa uhu hwezviyero: Zvakadini nemakambani, sesu pano paHZO asina hanya nekuchengeta mvura kubva mumudziyo kuitira kuti ichengetedze kubva mukukuvadzwa kwemvura? Mabatiro edu anobvumira mvura mukati memidziyo, asi iyo isingapinde mvura yatinopfeka iyo michina inodzivirira kubva kune chero mukana wekukuvara kwemvura. Aya makambani anopa sevhisi isingaenderane nezviyero zveIP, asi achiri kugona kupa mhinduro kune avo vatengi vanoda. dziviriro pamamiriro okunze uye pa“rufu runobva muchimbuzi” runotyisa.
Kushandisa izwi rekuti kusapinda mvura kunogona zvakare kutorwa seine njodzi mafambiro kumakambani mazhinji. Izvi zvinodaro nekuti izwi rekuti kusapinda mvura rinowanzo taura pfungwa yekuti ichi chiitiko chechigarire, uye kuti chero chave 'kusapinda mvura' hachizombokundika nekuda kwekusangana nemvura-zvisinei nemamiriro ezvinhu.
Nguva yekutumira: Sep-10-2020